brandyou, Author at Brand You Academy
LeaveaComment	/ Notes / By brandyou
Brand You Academy ကနေ အပါတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ ည (၇ : ၀၀)မှာ ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ Community MeetUp မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို အားလုံးအတွက် Notes အနေနဲ့ ပြန်ပြီး တင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ခြင်းစီ အသစ်လေးတွေကို ဒီ post လေးရဲ့ အောက်မှာပဲ ဆက်ပြီးတင်ပေးသွားပါမယ်။ Facilitators: Dr. Phio Thiha, Htet Yie, Dr. Nang Nay Nwe ————————- Conversation: 16 ————————————— Ikigai Passion: ကိုယ်ဘာကိုချစ်သလဲ? Mission: ကမ္ဘာကြီးက ဘာကိုလိုအပ်သလဲ? Vocation: ပိုက်ဆံရနိုင်သလား? Profession: ကိုယ်ကဘယ်နေရာမှာတော်သလဲ? ဒီအကွက် ၄ …
Beyond Conversations MeetUp Read More »
LeaveaComment	/ Personal Development / By brandyou
ဆိုးရွားတဲ့ အချိန်ကာလမှာ အကောင်းစိတ်မွေးဖို့၊ Positive ဖြစ်ဖို့က တအားကို ခက်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာရာကို ရှာဖို့ ခက်တဲ့အခါ၊ ဘဝက ခက်ခဲတဲ့အခါ၊ ဘေးကလူတွေက စိတ်ဓါတ်ကျနေကြတဲ့အခါ စိတ်ကြည်လင်အောင်နေဖို့ရာတောင် Guilty ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါ။ ငါ ကျန်းမာနေမှ ငါ့မိသားစုကို စောင့်ရှောက်နိုင်မယ်။ ငါ့လောက်မှ အဆင်မပြေသူတွေ၊ ငါ့ဝန်ထမ်းတွေ၊ ငါနဲ့ တွေ့ကြုံရသူတွေကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်။ ငါ စိတ်ကြည်လင်နေမှ ငါ့မိသားစုအပေါ် React လုပ်တာတွေ၊ ဘေးကလူတွေနဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို ပြဿနာရှာတာတွေ မလုပ်မိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ငါ့ရဲ့ စိတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပါ။ LIVE တစ်ရက်ချင်းစီ ရှင်သန်ပါ။ HOPE မျှော်လင့်ချက်ကို ရအောင် ဖန်တီးယူပါ။ LOVE ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှဝေပါ။ အေးချမ်းကြပါစေ။ ထက်ရည်
အခုကာလမှာ လူတိုင်းလို သောကရောက်ကြရပါတယ်။ အစစပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုတွေတောင် ရှေ့ရေးကိုတွေးပြီး သောကရောက်ကြရတယ်ဆိုရင် မပြည့်စုံတဲ့၊ တနေ့လုပ်မှတနေ့စားရတဲ့သူတွေအဖို့မှာ ပြောဖွယ်ရာမရှိပါဘူး။ မရေရာမှုတွေက ကြောက်ခြင်းကိုတိုးစေပါတယ်။ ကြောက်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။ လည်ပတ်နေတဲ့ စက်ယန္တရားကြီးတစ်ခု နှေးသွားတဲ့အခါ၊ ရပ်သွားတဲ့အခါ ပါဝင်နေတဲ့ လူတွေအဖို့မှာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်ကြရတာပါ။ အရင်က မနက်ကနေ ညအထိ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ လူမှုဘဝပုံစံကနေ အိမ်ထဲ တနေကုန်နေရတဲ့ (ပိတ်ထားခံရတဲ့) ပုံစံဖြစ်လာတယ်။ ပြေးလွှားနေရတဲ့ ခေတ်စနစ်ကနေ ပြေးဖို့မပြောနဲ့၊ အိမ်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပခုံးခြင်းတိုက်နေရမယ်ဆိုရင် တချိန်မဟုတ် တချိန် ပြဿနာဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ မိသားစုလို့ခေါ်နေပေမဲ့ မျက်နှာခြင်းမဆိုင်တဲ့ မိသားစုတွေအများကြီးပါပဲ။ ချစ်ခင်ကြင်နာကြတဲ့ မိသားစုတွေအဖို့ ဒီကာလကပျော်စရာ မမ်မိုရီတွေဖန်တီးဖို့ အချိန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ မတည့်တဲ့သူတွေအဖို့မှာ လျှပ်စစ်နဲ့မထိတွေ့အောင် သတိကြီးနဲ့ နေရသူတွေဖြစ်လာမှာပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြစ်တင်နေမယ်၊ အားကြီးတဲ့သူတွေက အားနည်းသူတွေကို အနိုင်ကျင့်နေမယ်၊ …
ဖန်တီးရမဲ့ နားလည်မှု Read More »
LeaveaComment	/ Brand & Image / By brandyou
Brand You Academy ရဲ့ Video လေးအောက်မှာ အစ်မတစ်ယောက်က ကွန်မန့်လေးလာရေးပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့က negativity ရှိတဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုမှ ရှောင်လို့ မရပါဘူး.. တွေ့နေကြုံနေရတာပါပဲ တဲ့။ အဲဒီအခါ စိတ်ဓါတ်အတက်အကျတွေ ရှိပေမဲ့လည်း ကိုယ်သွားချင်တဲ့ goal ကို ကြိုးစားပြီး အရောက်သွားရတာပါပဲ။ အားအင်တွေ ယူပြီးနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစားရတာပါပဲ.. လို့ ရေးထားပါတယ်။အလွန်ပဲ မှန်ပါတယ်။ သဘောကျမိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင် အကောင်းမြင်စိတ်ရှိဖို့၊ တွေးတတ်ဖို့ ကြိုးစားလေ့ကျင့်လို့ ရပေမဲ့ ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေ၊ ဥပမာ ကိုယ့်ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်စေ၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်၊ အထက်လူကြီးဖြစ်စေ အလွန် negative ဖြစ်တယ်၊ ဘယ်လိုမှကို ပြုပြင်ညှိနှိုင်းလို့ မရဘူးဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ အကောင်းမြင်တဲ့ စိတ်ကလေးပါ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ပြီး …
“Negativity များတဲ့သူတွေ နဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ” Read More »
April လထိ UK မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ Covid 19 ရဲ့ အမျိုးသမီးတွေအပေါ် သက်ရောက်မှုက အမျိုးသားတွေထက် ပိုဆိုးပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ အရင်ထက်ကို နာရီ ၂၀ လောက် ပိုအလုပ်လုပ်ကြရတယ် လို့ရေးထားပါတယ်။ Facebook ရဲ့ COO Sheryl Sandburg ကလည်း အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ ရုံးမှာ Double Shift အလုပ်လုပ်ရတဲ့အပြင် အိမ်ရောက်တော့ ကလေးထိန်း၊ အိမ်မှုကိစ္စတွေပါ လုပ်၊ နာမကျန်းဖြစ်သူတွေကိုပါစောင့်ရှောက် ရတာကြောင့် Double-Double-Shift ဖြစ်နေပြီ ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာလည်း တူတူပါပဲ။ Work From Home ဆိုပေမဲ့ ကလေးလည်းထိန်းရ၊ ကလေး Online Learning လဲပါရ၊ အိမ်မှု ကိစ္စတွေလည်းလုပ်ရနဲ့ ပင်ပန်းကြရပါတယ်။ …
“ဒီကာလမှာ ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကို မြှင့်တင်လိုသူတွေအတွက်”
အခုကာလမှာ အလုပ်နားထားတဲ့သူတွေ၊ Work From Home လုပ်ရတဲ့သူတွေ၊ အလှည့်နဲ့ အလုပ်ဆင်းရသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ကာလ၊ ဘယ်လောက်ကြာမယ်မှန်းမသိတဲ့ ကာလမှာ အချိန်ကုန်မခံစေချင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမြဲတိုးတက်နေအောင်၊ အဆက်မပြတ် မြှင့်တင်ထားချင်တဲ့ သူတွေအတွက် သိထားသင့်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေအကြောင်းကို Brand You Academy ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်မှုကို ၂ပိုင်းခွဲလို့ရပါတယ်။ Job Skillsကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်မှု Life Skills ဘဝကိုဘယ်လိုရှင်သန်ပြီးနေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု Skills ကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်….Expertise = လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဘယ်လောက်ထိကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်တတ်လဲ။Talent = မလုပ်ရသေးပေမယ့် နဂိုကတည်းက ဘယ်နေရာမှာ ပါရမီပါလဲ။ဝန်ထမ်းအလုပ်ကို စိတ်ပျက်ပြီ၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ကဘယ်လို Skills တွေရှိလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ Job Skills မှာ …
“ဒီကာလမှာ ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကို မြှင့်တင်လိုသူတွေအတွက်” Read More »
Defining NEEDS in Personal Branding Process
LeaveaComment	/ Branding / By brandyou
လူတစ်ယောက်ရဲ့ Personal brand ကို ရေရှည်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ Audience ရွေးချယ်ခြင်း တနည်းအားဖြင့် ကိုယ်က ဘယ်လိုလူမျိုးကို Impress လုပ်ချင်တာလဲဆိုတာက အရေးကြီးတဲ့နေရာကနေ ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အထက်အရာရှိနဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေကြားထဲမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်အဖြစ် တည်ဆောက်ချင်တာလား။ မိသားစုထဲမှာ မိသားစုဝင်ကောင်းတစ်ယောက် အဖြစ်တည်ဆောက်ချင်တာလား။ ကျောင်းသားတွေကြားထဲမှာ အသင်အပြကောင်းတဲ့ဆရာအဖြစ်၊ ဝယ်သူတွေကြားထဲမှာ အရောင်းသမားကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်၊ အိမ်ရှင်မတွေကြားထဲမှာ အချက်အပြုတ်ကောင်းသူတစ်ယောက်အဖြစ် နာမည်ကောင်းတည်ဆောက်လိုတာလား။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ Audience ကို သိရပါမယ်။ လူတိုင်းကို နေရာတိုင်းမှာ မှန်ကန်တဲ့ impression ကိုပေးဖို့ဆိုတာက နည်းနည်းခက်ခဲနိုင်ပေမဲ့ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားနဲ့၊ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ audience အရှေ့မှာတော့ မှန်ကန်တဲ့ အနေအထိုင်၊ အပြောအဆို၊ လုပ်ပုံကိုင်ပုံရှိသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ “လိုအပ်ချက်တွေကို နားလည်ဖို့”တခါတရံမှာ ကိုယ်က အများကြီးလုပ်ဆောင်နေသလောက် ရလဒ်မရဘူးဆိုရင် ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ …
Defining NEEDS in Personal Branding Process Read More »
LeaveaComment	/ Life, Personal Development / By brandyou
နေ့စဉ်နဲ့အမျှတော့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေကြရတယ်။ ရှေ့ဆက်နေရတယ်။ အချိန်တွေကို ရပ်တန့်လို့ မရသလို ဘဝကိုလည်း ခဏရွှေ့ဆိုင်းထားလို့ မရဘူး။ သို့သော်လည်း အချိန်တွေကသာ ရှေ့ကို သွားနေတာ ကိုယ့်ဘဝက တစ်နေရာရာမှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ အဲ့လိုလူတွေအတွက် အကြံပြုချက် ၁၀ ခုကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။၁။ တခြားသူတွေရဲ့ အတွေးအမြင်ကို ကိုယ့်ဘဝအပေါ် လွှမ်းမိုးခွင့် ပေးထားခြင်းဘယ်သူ ဘာပြောပြော ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုတာ မကောင်းသလို၊ သူများ ဘယ်လိုထင်မလဲလို့ အမြဲတမ်း ထည့်စဉ်းစားနေတာကလည်း ကိုယ့်ကို မပျော်မရွှင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လောကမှာ လူတိုင်း ၁၀၀ % ထောက်ခံတာ ခံရသူရယ်လို့ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး။ မကြိုက်တဲ့သူ ရှိတယ်။ မုန်းတဲ့သူတောင် ရှိမယ်။ ဒါကို အရှိအရှိအတိုင်း လက်ခံပြီး ကိုယ်လုပ်သင့်တာ …
“ကိုယ့်ဘဝမှာ ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ လွှတ်ချခဲ့သင့်တဲ့ အရာ ၁၀ ခု” Read More »
LeaveaComment	/ Personal Development, Uncategorized / By brandyou
လူတိုင်းကတော့ ပျော်ရွှင်ချင်ကြတာပါပဲ။ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုနောက်ကိုလိုက်ရင်း မလုပ်သင့်တာတွေကို လုပ်မိသူတွေရှိသလို ခဏတာပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ လဲလိုက်ရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ တချို့ကျပြန်တော့လည်း အားကျစရာကောင်းလောက်အောင်ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ Mikael Krogerus နဲ့ Roman Tschappeler တို့ရေးတဲ့ The Decision Book: Fifty models for strategic thinking ဆိုတာလေးထဲမှာပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖတ်မိတာလေးတစ်ခု မျှဝေချင်ပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်က ဆုံးဖြတ်ချက်ချရခက်နေသူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နားလည်ချင်သူတွေ၊ တိုးတက်ချင်သူတွေ၊ သူများကို ပိုပြီးနားလည်ချင်ပါတယ် ဆိုသူတွေအတွက် workbook သဘောမျိုး model လေးတွေကို ပုံလေးတွေနဲ့ သီအိုရီလေးတွေ ပေးထားတာပါ။ ပေးထားတဲ့ model ထဲမှာ ထည့်ရေးကြည့်ပါ စသဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်းသဘောမျိုးလေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ “What makes you …
“ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ သော့ချက်” Read More »
LeaveaComment	/ Success / By brandyou
မနက်ခင်းတွေက အရေးကြီးပါတယ်။ အောင်မြင်သူ တော်တော်များများကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း သူတို့ဟာ မနက်ခင်းတွေကို ဂရုတစိုက်နဲ့ အကောင်းဆုံး စတင်တတ်ကြတာ တွေ့ရတယ်။ ကိုယ် မနက်ခင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ခံစားမှုက တစ်နေကုန်အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု ရှိတယ်။ မနက်ကို စောစောထမယ်။ အိပ်ရာသိမ်းမယ်။ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်မယ်။ မနက်စာ ကောင်းကောင်းစားမယ်။ ဘာသာရေးအလုပ် ၁၀ မိနစ်၊ ၁၅ မိနစ်လောက် လုပ်မယ်။ အဲ့လို စိတ်ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့၊ တခုခု ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အလုပ်ကို စလုပ်ရတာက မနက်ကို နောက်ကျမှ နိုး၊ ရေမိုးချိုးပြီး အလုပ်စားပွဲ တန်းထိုင်ရတဲ့နေ့ထက်စာရင် ခံစားချက် ပိုကောင်းတယ်။ အလုပ်ပိုပြီးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ပိုမြင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်ခင်းတွေကို အကောင်းဆုံး စတင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ …
မနက်ခင်းကို အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုစတင်ကြမလဲ Read More »